Home Wararka Galmudug oo shaacisay Musharaxiinta kuraasta berri lagu dooran doono Dhuusamareeb
Galmudug oo shaacisay Musharaxiinta kuraasta berri lagu dooran doono Dhuusamareeb
Guddiga doorashooyinka Galmudug ayaa soo gudbiyay musharixiinta isu diiwaangelisay u tartamidda 4 kursi oo berri 03/02/2022 Doorashadoodu lagu qabanayo Dhuusamareeb.
#HOP139: Waxaa ku fadhiyay Cabdixakiim Macalin Axmed oo xubin ka ah Aqalka Sare.
#HOP049: Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ku fadhiyay ayaa markale u tartamaya Kursigaan.
#HOP051 Xasan Macalin Maxamuud Sheekh Cali ayaa ku fadhiyay balse looma diiwaangelin u tartamidda kursigaan.
#HOP061: Cabdiweli Maxamed Qanyare Afrax ayaa ku fadhiyay Baarlamaankii 10aad balse sooma gelin diiwaanka musharixiinta.
Previous article[Daawo] Beesha Mariixaan oo qeylo dhaan u dirsaday Itoobiya, xilli aay shacab ku xasuuqeen Galgaduud
Next articleBreaking News: Kulan Degdeg ah oo ka socda Madaxtooyada Hirshabelle
Dakada Muqdisho oo lagu xiro Masawac lagu hago maraakiibta
(Akhriso) Su’aalihii fadeexadda ka raacday ee uu xalay diiday in uu...